Google Web Stories: Torolalana azo ampiharina amin'ny fanomezana traikefa miendrika feno | Martech Zone
Amin'izao vanim-potoana izao, isika mpanjifa dia maniry ny handevona votoaty haingana araka izay tratra ary tsara kokoa amin'ny ezaka kely.
Izany no nahatonga an'i Google hampiditra ny dikan-ny votoaty fohy antsoina hoe Tantaran'ny Google Web.
Inona anefa no atao hoe tantara an-tranonkala Google ary ahoana no fandraisan'izy ireo anjara amin'ny traikefa manafintohina kokoa sy manokana? Maninona no mampiasa tantara an-tranonkala Google ary ahoana no ahafahanao mamorona ny anao manokana?
Ity torolalana azo ampiharina ity dia hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny tombotsoan'ny fampiasana ireo tantara an-tranonkala sy ny fomba fampiasana azy ireo amin'ny filanao.
Inona no atao hoe Google Web Story?
Ny tantara an-tranonkala dia atiny amin'ny efijery feno ho an'ny tranonkala izay manankarena amin'ny maso ary ahafahanao manindry na mikisaka amin'ny tantara iray mankany amin'ny manaraka. Mitovy tanteraka amin'ny tantaran'ny Facebook sy Instagram izany. Misy tantara an-tranonkala maherin'ny 20 tapitrisa izay an-tserasera amin'ny fitambarany ary nanomboka tamin'ny Oktobra 2020, sehatra vaovao 6,500 no namoaka ny tantaran'ny tranonkalany voalohany.
Afaka manome endrika hafa ho an'ny mpanjifa izay mirotsaka amin'ny votoaty mandritra ny diany maraina izy ireo na mikoriana tsy misy tanjona amin'ny findainy rehefa mipetraka eo anoloan'ny televiny. Amin'ny maha-orinasa azy dia mety hanampy ny manatratra ny mpihaino kendrenao, indrindra amin'ny fitaoman'i Google.
Nahoana ianao no tokony hampiasa Google Web Stories?
Ka maninona no mampiasa Google Web Stories? Fandrosoana amin'ny fikarohana Google izy ireo izay mety tsara amin'ny fisintonana fifamoivoizana bebe kokoa ary manome fahafahana ho hita bebe kokoa ny atiny tranonkalanao. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny tantara an-tranonkala Google izay azo avy amin'ny fampiasana azy ireo ary mendrika ny ezaka ilaina amin'ny famoronana azy ireo hatrany am-boalohany.
Mampitombo ny laharanao – Mafy ny fifaninanana hahazoana ny laharana ambony amin'ny pejy Google. ihany 5.7% amin'ny pejy dia hahazo ny laharana ambony indrindra amin'ny valin'ny fikarohana 10 ao anatin'ny herintaona navoaka, araka ny Ahrefs. Ny tantaran'ny tranonkala Google dia manome anao fahafahana hahazo ny laharana voalohany amin'ny valin'ny fikarohana. Ny fampiasana ny Google Web Services, amin'ny ankapobeny, dia afaka manampy anao hametraka ny orinasanao amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana (SERPs). Ny fanaovana izany dia mety hitondra fifamoivoizana bebe kokoa ary antenaina, fivarotana bebe kokoa!
Mora zaraina ny votoaty - Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny tantaran'ny tranokala Google dia ny ahafahanao mizara mora foana ny atiny amin'ny namana an-tserasera, fianakaviana ary mpiara-miasa. Ny tantara an-tranonkala tsirairay dia afaka manome votoaty manan-danja izay azon'ny mpampiasa zaraina mora foana nefa tsy mila manao fanitsiana na fanitsiana alohan'ny tsindrio ny fizarana.
Manome fahafahana ambony indrindra - Ny tantaran'ny tranonkala Google dia endri-javatra natao manokana ho an'ny tranokala finday hita. Mitovy amin'ny tantaran'ny Instagram sy Facebook, dia afaka manome fotoana lehibe hamoronana sy hanampiana tantara ao amin'ny tranokalan'izy ireo WordPress ary koa ny rindranasa mitambatra hafa. Ireo tantara dia aseho amin'ny valin'ny fikarohana izay azon'ny olona an-tapitrisa hanindry azy ireo, fa tsy olona vitsivitsy fotsiny
Tsara ho an'ny Search Engine Optimization - Optimization motera fikarohana (SEO) dia zava-dehibe ho an'ny olona sy orinasa maro rehefa miezaka manatsara ny fisiany an-tserasera. 70% amin'ny mpivarotra an-tserasera milaza fa ny fikarohana organika dia tsara kokoa noho ny fikarohana karama amin'ny famokarana varotra. Ny tantaran'ny tranonkala Google dia mampiditra fomba fanao tsara indrindra amin'ny famoronana votoaty mahaliana kokoa izay tsy ho ao amin'ny Fikarohana Google ihany fa amin'ny alàlan'ny Google Images sy ny Google App.
Ny Web Stories dia azo atao vola - Ny tantaran'ny tranokala Google dia manome fahafahana ho an'ny mpamoaka vola hamatsy vola ny atiny amin'ny alàlan'ny dokam-barotra amin'ny efijery feno sy rohy mifandray. Afaka mandray soa avy amin'izany koa ny mpanao dokambarotra, manome traikefa hita maso kokoa amin'ny alalan'ny horonan-tsary fitantarana.
Manampy hanara-maso ny traikefan'ny mpampiasa sy handrefesana ny fahombiazany - Amin'ny alalan'ity karazana votoaty ity, afaka manara-maso mora foana ny traikefan'ny mpampiasa ny mpamoaka ary mamela azy ireo handrefesana ny zava-bitan'ny tantara tsirairay izay navoakany. Azonao atao koa ny mampifandray azy ireo amin'ny sehatra toy ny Google Analytics, izay tsara amin'ny fanangonana vaovao amin'ny ankapobeny ho an'ny tranokalanao.
Manome traikefa ifanakalozan-kevitra sy immersive ho an'ny mpampiasa anao – Iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny tantaran'ny tranokalan'ny Google ny fanomezany traikefa mifampiraharaha sy manentana ny mpampiasa azy. Manome safidy ny mpanonta hampiditra singa mifampiresaka toy ny quizzes sy fitsapan-kevitra, izay afaka milaza aminao bebe kokoa momba ny mpihaino anao.
Aiza no ahitana ny Google Web Stories?
Ny tantara an-tranonkala dia azo trandrahana rehefa ao amin'ny Google manerana ny pejin-karoka, Google Discover, na Google Images. Na izany aza, tsara ny manamarika fa ny tantaran'ny tranonkala Google dia tsy azo jerena amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpampiasa Amerikana, Indiana ary Breziliana. Fotoana ihany anefa izany mandra-pahatongan'izany miitatra lavitra kokoa.
Raha tsara vintana ianao ho any amin'ny iray amin'ireo firenena telo ireo, dia azo inoana fa hiseho eo am-piandohan'ny valin'ny fikarohanao izany. Satria mora idirana izy io, dia tsy ho sahirana ianao amin'ny fitadiavana azy.
Ahoana ny famoronana Google Web Stories?
Ny famoronana tantara an-tranonkala dia tsy mitaky anao hanana endrika na traikefa ara-teknika be dia be. Tahaka ny amin'ireo sehatra media sosialy izay manana endri-tantara, dia mora ny mamorona iray. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy azonao resahina rehefa mamorona ny tantaran'ny tranonkalanao voalohany.
Mampiasà mpamoaka sary - Web Stories WordPress plugin dia toerana tsara hanombohana.
Mieritrereta tantara iray - Mamorona tabilao tantara ary mariho ny tanjonao na tanjonao amin'ny atiny.
Mamorona ny tantaran'ny tranonkala - Raiso ny loharano misy anao ary raketo / angony ny tantara ary ampiasao ny tonian-dahatsoratra hita maso hamoronana azy.
Avoahy ny tantaran'ny tranonkala - Avoahy ao amin'ny Google ny tantara ary jereo ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Ohatra amin'ny Google Web Stories
Mendrika ny manana ohatra momba ny tantara an-tranonkala Google ka raha manapa-kevitra ny hamorona azy ireo ianao dia manana aingam-panahy hiasa. Ireto misy ohatra vitsivitsy hanombohana anao, kitiho hanokatra azy ireo.
Ny VICE dia naka aingam-panahy avy amin'ny areti-mifindra sy ireo mahandro sakafo avy any an-trano miaraka amin'ny andian-dahatsoratra mahandro sakafo araka ny aseho etsy ambony. Fomba tsara hikarakarana ny demografika midadasika, fa tsy ny mpihaino kendreny fotsiny.
Noforonin'i Seeker ity tantara an-tranonkala ity, natao hifampizarana ny fahalalana momba ny siansa saingy ny sary sy ny lahatsoratra nampiasaina dia tsy nanome be dia be. Midika izany fa maro kokoa no mety hanindry azy io mba hanomezana fahafaham-po ny fahalianany.
Ny loharanom-panabeazana an'i Nylon izay omeny miaraka amin'ny tantara an-tranonkala etsy ambony dia manome traikefa mavitrika ho an'ny mpampiasa tsy avy amin'ny lafiny hita maso fotsiny fa manome lanja ihany koa.
Ny endrik'ireo tantara an-tranonkala Google dia fomba tsara hizarana vaovao amin'ny fomba vaovao mifanentana sy mampientanentana. Na mpanjifa ianao, na mpamoaka, na mpanao dokam-barotra, dia misy tombony amin'ny fampiasana ny endrika fitantarana miendrika an'i Google izay tantara ao amin'ny tranonkala.
Tags: fanangonan-tsoniatantara web googeGoogletantara an-tranonkala googlegoogle web storyfifandraisanatantara mifampiresakafikarohana biolojikaSEOserpatiny azo zarainaatiny sosialyfitantarana tantarafitantaranaampytantara an-tranonkalatantara an-tranonkalaWordPressplugin WordPress